[တရားဝင်] dr.fone ကိရိယာတန်ဆာပလာ - အန်းဒရွိုက်မှာ Data Eraser ကို: အပြည့်အဝကို Android ပေါ်မှာအရာအားလုံး Erase နဲ့သင့်ရဲ့သီးသန့်လုံခြုံရေးကာကွယ်ပါ
dr.fone ကိရိယာတန်ဆာပလာ - အန်းဒရွိုက်မှာ Data Eraser ကို
အပြည့်အဝကို Android ပေါ်မှာအရာအားလုံး Erase နဲ့သင့်ရဲ့သီးသန့်လုံခြုံရေးကာကွယ်ပါ
လုံးဝနှင့်အပြီးအပိုင်သင့်ရဲ့ Android Wipe ။
ဓါတ်ပုံများ, အဆက်အသွယ်များ, မက်ဆေ့ခ်ျများ, ခေါ်ဆိုမှုမှတ်တမ်းများအပေါင်းတို့နှင့်ပုဂ္ဂလိကဒေတာအားဖျက်မည်။
ဈေးကွက်ထဲမှာရရှိနိုင်သမျှသော Android ထုတ်ကုန်ထောက်ပံ့ပေးသည်။
ရိုးရှင်းသောဖျက်မှုသို့မဟုတ်စက်ရုံတည်ဆောက်မှုအပြီးအပိုင် Android ပေါ်မှာ data တွေကိုဖျက်ပစ်မထားဘူး။ ပယ်ဖျက်ခဲ့တဲ့ဒေတာတုန်းပဲရရှိနိုင်သည့်နည်းပညာနှင့်အတူပြန်လည်ကောင်းမွန်စေနိုင်သည်။ အန်းဒရွိုက်မှာ Data Eraser ကိုသင့်ရဲ့ privacy ကိုအပြီးအပိုင်ဖျက်ပစ်ဖိုင်များ, ရှင်းလင်းခြင်း browsing history, cache များကိုဖျက်ခြင်းနှင့်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်တွေကိုကာကွယ်ဖို့အားဖြင့်ဘေးကင်းလုံခြုံကြောင်းကိုသေချာ။
ရောင်းသို့မဟုတ်သင့်မှာ Android ဖုန်းလှူဒါန်းခဲ့?
ပထမဦးဆုံးသင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဒေတာထုတ်ရှင်းလင်းဖို့ကို Android မှာ Data Eraser ကိုအသုံးပြုပါ။
အပြည့်အဝသင့်ရဲ့ Android ဖုန်းပေါ်မှာအရာအားလုံးကိုဖျက်ပစ်။
သင့်ရဲ့အသုံးပြုသော Android ဖုန်းသို့မဟုတ် Tablet ကိုရောင်း? အမြဲတမ်းသင့်ရဲ့ Android အပေါ်အရာအားလုံးဖျက်ပစ်နှင့်သင့် privacy ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ကို Android မှာ Data Eraser ကို - dr.fone ကိရိယာတန်ဆာပလာများကိုအသုံးပြုပါ။
လုံးဝစင်ကြယ်သော Android ဖုန်းသုတ်။
ရိုးရာစက်ရုံဒေတာမှပြန်လည်စတင်ဖုန်းကို 100% ပေါ်တွင်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုရှင်းလင်းပါဘူး။ အန်းဒရွိုက်မှာ Data Eraser ကိုသငျသညျသနျ့ရှငျးနက Android device ကိုသုတ်နှင့်နောက်ကျောစက်ရုံတွင် settings ကိုမှကရကူညီပေးသည်
အန်းဒရွိုက်မှာ Data Eraser ကိုထိုကဲ့သို့သောစသည်တို့ကိုဓာတ်ပုံများ, မက်ဆေ့ခ်ျများ, အဆက်အသွယ်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုမှတ်တမ်းများ, မှတ်စုများ, ပြက္ခဒိန်များနှင့် app အချက်အလက်, အဖြစ်ပုဂ္ဂလိကဒေတာ, ဖျက်ပစ်ရန်သင့်အားဖွ
Android ဖုန်းအဟောင်း Erase နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်ပေးသည်။
လက်ျာရေးကိရိယာများနှင့်အတူ Android ဖုန်းအဟောင်းပေါ်တွင်ဖျက်ပစ်ဒေတာတုန်းပဲပြန်လည်ကောင်းမွန်စေနိုင်သည်။ 10 ထဲက 1 ကမ္ဘာပေါ်မှာသူခိုးတွေတစ်သားကောင်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက်လုံးဝစင်ကြယ်သောသူတို့အားရှင်းလင်းခြင်းဖြင့်ကာကွယ်ပါ။
ထောင်ပေါင်းများစွာသောကွဲပြားခြားနားသောအန်းဒရွိုက်စနစ်အားပေါ်ပြေး Android ထုတ်ကုန်ကိုထောကျပံ့။
အခြေခံအားဖြင့် dr.fone ကိရိယာတန်ဆာပလာ - အန်းဒရွိုက်မှာ Data Eraser ကိုဈေးကွက်ထဲမှာရရှိနိုင်သမျှသော Android ထုတ်ကုန်ထောက်ခံပါတယ်။ ဒါဟာပိုပြီးတခါအသစ်သော device များရရှိနိုင်ပါသည်ထောကျပံ့ပေးလိမ့်မယ်။
သင့်ရဲ့ Android ပေါ်မှာကိုယ်ရေးဒေတာများအားလုံးသည်မျိုးကိုဖျက်ရန်
သင်အပြီးအပိုင်သင့်ရဲ့ Android အပေါ်စသည်တို့ကို, ဓါတ်ပုံများ, မက်ဆေ့ခ်ျများနှင့် attachment များကို, အဆက်အသွယ်သမိုင်းခေါ်မှတ်စုများ, ပြက္ခဒိန်များ, သတိပေးချက်များနှင့် app ကိုဒေတာအပါအဝင်အားလုံးပုဂ္ဂလိကသတင်းအချက်အလက်များသုတ်မှအန်းဒရွိုက်မှာ Data Eraser ကိုသုံးနိုင်သည်။
အဘယ်ကြောင့် dr.fone ကိရိယာတန်ဆာပလာကိုရွေးချယ်ပါ
ဖျက်ဒေတာကိုမဆို tool ကိုအားဖြင့်ပြန်လည်ကောင်းမွန်မရနိုင်ပါ။
လူတိုင်းသုံးစွဲဖို့အဘို့အလိုလို interface ကို။
အားလုံး Android ဖုန်းများအတွက်ကိုထောကျပံ့
အန်းဒရွိုက်မှာ Data Eraser ကိုဈေးကွက်ထဲမှာအားလုံးရရှိနိုင်ပါက Android devices တွေကိုထောက်ခံပါတယ်။ သငျသညျစသည်တို့က Samsung, HTC, Sony, Motorola ကို Google က Nexus, LG သို့မဟုတ် ZTE ကရှိသည်နှင့်သင့်ဖုန်းကိုအပြေးနေသည်က Android အဘယ်အရာကိုဗားရှင်းအဘယ်သူမျှမကိစ္စ, အန်းဒရွိုက်မှာ Data Eraser ကိုသင်အပြီးအပိုင်ဖုန်းပေါ်မှာအရာအားလုံးကိုဖျက်ပစ်ကူညီပေးသည်။
အန်းဒရွိုက်မှာ Data Eraser ကိုဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ,
အန်းဒရွိုက်မှာ Data Eraser ကိုသငျသညျလုံးဝဖတ်လို့မရအောင်သင့်ရဲ့ဒေတာကိုဆပ်ပြီးရင်လုံးဝမြေတပြင်လုံး disk ကိုကို clean up ကူညီပေးသည်။ ထိုအခါအသုံးပြုသူများကိုယ်တိုင်ဖုန်း afterword အပေါ်စက်ရုံတည်ဆောက်မှုလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အဲဒီနှစျခုစစ်ဆင်ရေးနှင့်အတူသင့်ရဲ့ဒေတာကိုတဖန်မည်သူမဆိုပြန်လည်ကောင်းမွန်ခံရနိုင်ပါလိမ့်မည်မဟုတ်။
အန်းဒရွိုက်မှာ Data Eraser ကိုလုံးဝဖုန်းပေါ်မှာရှိသမျှ data တွေကိုဖျက်ပစ်သလား
ဟုတ်ပါတယ်, အန်းဒရွိုက်မှာ Data Eraser ကိုလုံးဝနှင့်အပြီးအပိုင်စသည်တို့ကို, အဆက်အသွယ်မက်ဆေ့ခ်ျများ, ဓာတ်ပုံများ, ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုမှတ်တမ်းများ, ပြက္ခဒိန်, app နဲ့ App ကိုဒေတာအပါအဝင်ဖုန်းပေါ်မှာရှိသမျှပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ, ကို clean up
ငါက Android မှာ Data Eraser ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါငါမှအာရုံစူးစိုက်မှုအဘယျသို့ပေးဆောင်ရမလဲ?
ဖုန်းကို disconnect ဒါမှမဟုတ်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးစဉ်အတွင်းမည်သည့်အခြား Android စီမံခန့်ခွဲမှုဆော့ဖ်ဝဲကိုဖွင့်လှစ်ကြဘူးပါ။ ထိုအခါအဆုံးမှာ, သင့်ဖုန်းပေါ်မှာစက်ရုံတည်ဆောက်မှုဖျော်ဖြေဖို့ကို Android မှာ Data Eraser ကိုအပေါ်ညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာပါ။
အန်းဒရွိုက်ဘယျလို devices တွေကိုအန်းဒရွိုက်မှာ Data Eraser ကိုထောက်ခံမှုသနည်း
လောလောဆယ်အန်းဒရွိုက်မှာ Data Eraser ကိုဈေးကွက်ထဲမှာရရှိနိုင်သမျှသော Android ထုတ်ကုန်ထောက်ခံပါတယ်။ သူတို့ဖြန့်ချိနေကြပါတယ်တစ်ချိန်ကထိုသို့လျင်မြန်စွာပိုပြီးသစ်ကို Android ထုတ်ကုန်ကိုထောကျပံ့မညျဖွစျသညျ။
" Android အတွက် Wondershare dr.fone ကိရိယာတန်ဆာပလာကျွမ်းကျင်မှုအားလုံးအဆင့်ဆင့်၏အသုံးပြုသူများအနေဖြင့်အညွှန်းဖြစ်နိုင်သည်ကို interface ကိုသုံးစွဲဖို့လွယ်ကူသောရှိပါတယ်။ ဒါဟာပေါ့ပါးသည်နှင့်စနစ်အားအရင်းအမြစ်များကြီးမားတဲ့ငွေပမာဏကိုမသုံးထားဘူး။ ယေဘုယျအား, ဒီမဟုတ်ဘဲအသုံးဝင်သော tool ကိုကိရိယာအစုံသင်ထွက်ရနိုင်တယ်လို့ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ Android device ကိုများအတွက်ဒေတာဆယ်တင်ရေးမှကြွလာသောအခါအနည်းငယ်စေးကပ်အခြေအနေ။ >> ပိုပြီးလေ့လာပါ
- filehippo ကသာထိပ်တန်းအဆင့် software ကိုပေးမယ့်ထိပ်တန်းအဆင့် software ကို download စာမျက်နှာကိုမှသည်။
dr.fone လုံးဝတစ်ထစ်ခြင်းမရှိဘဲငါ၏အ samsung S5 သန့်စင်။ ယခုငါသည်ငါ့သတင်းအချက်အလက်စိုးရိမ်ခြင်းမရှိဘဲရောင်းနိုင်ပါတယ်။
gooood အလုပ် !!!
အန်းဒရွိုက် data တွေကိုခဲဖျက်ကယ့်ကိုချောချောမွေ့မွေ့အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ပထမတော့ကျနော်သံသယဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့သော် dr.fone ဿုံအလုပ်လုပ်ထုတ်ပြန်သွားလေ၏။ nice!
ထိပ်တန်း7Android ကိုဒေတာများနေတဲ့ Eraser ဆော့ဝဲအပြီးတိုင်သင့်ဟောငျးကို Android Wipe မှ
ထိပ်တန်း6Android ကိုဒေတာများကို Erase Apps ကပသင့်ရဲ့သီးသန့်လုံခြုံရေးကာကွယ်ပါရန်
Samsung ရဲ့ Galaxy / မှတ်ချက်အနေဖြင့်အားဖျက်သိမ်းပြီးဓါတ်ပုံများ Recover လုပ်နည်း
မရဏ၏ Black ကဖန်သားပြင်: Samsung ရဲ့ Galaxy ရုတ်တရက်သေခြင်းက Fix ဖို့ကိုဘယ်လို
Samsung က Data Recovery လုပ်ပါမှ2နည်းလမ်းများသင်သိမှဖူး
Samsung ကဓာတ်ပုံ Recovery ကို
သင့်ရဲ့ Samsung က Cell Phone ထဲကနေဖျက်ပစ်မက်ဆေ့ခ်ျများ Recover လုပ်နည်း
Samsung ကဖုန်းထဲကနေဖျက်ပစ်အကြောင်းအရာ Recover ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း
အန်းဒရွိုက်မှာ Data Extraction (ပျက်ဆီးနေသောစက်ပစ္စည်း)
5 မိနစ်အတွင်းကျိုးပဲ့ကို Android ဖုန်းများနှင့် tablet ကနေကယ်ဆယ်ရေးဒေတာ။
ဒေတာဆုံးရှုံးစရာမလိုဘဲ Android ထုတ်ကုန်များမှသော့ခတ်မျက်နှာပြင်ဖယ်ရှားပါ။
selection ကွန်ပျူတာပေါ်မှာသင့်ရဲ့ Android data တွေကို backup လုပ်ထားနှင့်သင့်လိုအပ်ချက်အတိုင်း restore ။